Njengoba i-WOWOW iwukuthi uyaqiniseka ngekhwalithi yesikhunta sokufafaza se-nickel pot briking, ikunikeza isikhathi semvume yeminyaka engu-5. Njengoba i-WOWOW inikeza inani elifanele ngemali ongayithola, ikunikeza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Ngakho-ke awubi sengozini nakancane. Uma ubengenakukholwa ngaleli faucet ye-nickel pot filler faucet, umane uthole imali ephelele. I-Wowow imele umkhiqizo wayo nokuthi ungabona ngokushesha. Izinzuzo zesikhwanyana sokufafaza se-nickel pot filler faucet ngamafuphi:
• Unika i-wow-factor kunoma iyiphi ikhishi
• Isimanjemanje sebhodwe lokuqamba
• Ukuhlangana kwekhwalithi namavevu
• Kuphephe kakhulu ukusebenzisa
• Ukuqedwa kwe-nickel okuhlanganisiwe
• Kulula ukuyifaka ngemizuzu engama-30
SKU: 2311300 Categories: Ikhishi Faucets, Embizeni Filler Ikhishi ompompi Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Ibhodlela lokugcwalisa, I-single Lever